Goobaha Taleefanka: Ku Samee Shabkada Funnel Iibka iyo Bogag Soo Degista Daqiiqado Gudahood Adigoo Adeegsanaya Taleefankaaga | Martech Zone
Goobaha Taleefanka: Samee Shabkada Funnel-ka Iibka iyo Bogag Soo Degista Daqiiqado Gudahood Adigoo Isticmaalaya Taleefankaaga
Sabti, Noofembar 27, 2021 Monday, May 16, 2022 Douglas Karr
Tani waxay runtii ka cadhaysiin kartaa qaar ka mid ah dadka warshadahayda, laakiin shirkado badan ayaa si fudud u haysan nooc ka caawiya maalgelinta goobaha la geeyo iyo istaraatijiyad suuq-geyneed oo ballaaran. Waan ogahay ganacsiyo yar yar oo wali albaab-ilaa-albaab u gala ama ku tiirsan erey-af-afka si ay u taageeraan ganacsi cajiib ah.
Goobaha Taleefanka: Bogagga Daqiiqado gudahood ku bilow
Ganacsi kastaa waa inuu isku dheelitiraa wakhtiga, dadaalka, iyo maalgalinta mulkiilaha si uu u soo saaro habka wax iibsiga ugu hufan si uu u keeno ganacsi cusub. Mararka qaarkood, maalgashiga mareegaha waa mid fudud sida qabsashada domainka oo la gelinayo nadiif, fudud, moobil ka jawaab celin, iyo bog degitaan la hagaajiyay. Taasi waa dhab ahaan Goobaha telefoonada waxaa loogu talagalay…
Dooro qaab-dhismeedka ama meel hoose ka soo bilow. Qaababka horay loo sameeyay ayaa ku rakib 2 dhagsi.
Bilow dhisidda bogag iyagoo ku daraya qoraal, sawirro, iyo muuqaal tafatirahooda fudud oo jiid-iyo-jiid.
Calaamadee goobta addoo isticmaalaya xayndaabkaaga gaarka ah oo ku dara meel kasta oo dhinac saddexaad ah oo aad isticmaalayso.
Deji jawaabaha iswada oo leh email ama SMS dabagal.
Kobci gaadhistaada iyada oo loo marayo xayaysiis iyo nuqul AI ay wado.
Goobaha telefoonadu waxay isku daraan qaabab adag, xog ururin, iyo macluumaadka AI ay wado si ay uga caawiso ganacsiyada ama wakaaladaha in ay daqiiqado gudahood ku soo saaraan goobo iib ah oo wax-is-beddelaya.
Goobaha telefoonada waxa uu ka caawiyay in ka badan 10,000 meherado in ay soo saaraan in ka badan 1 milyan oo hogaamin oo u beddela kuwa malaayiin dakhli ah. Websaydhyada telefoonadu waa bog dhise aan xanuun lahayn oo kuu sahlaya inaad dhaliso hogaan badan, macaamiil badan, iyo iibsi badan. Goobaha telefoonku waxay awood u siinayaan ganacsiyada yaryar iyo wakaaladaha:
Bilaabida Bogagga daqiiqado ku saabsan qalab kasta. Dhisayaashooda mareegaha waxa ku jira habab hore loo dhisay, qaab beddelaad sare leh oo aad isticmaali karto si goobtaada lagu dhiso daqiiqado yar gudahood.
Ururi Hogaaminta iyo ballamaha buugaagta. Dhis bogag fudud oo haga booqdeyaasha hab-socodka iibka tallaabo tallaabo adiga oo xog ururinaysa jidka si aad ula socoto.
Abuur Mawduuc - Waxaad ku soo saari kartaa nuqul suuq-geyneed sare leh dhowr jeer oo keliya oo aad la socoto qoraaga AI ee Phonesite.
Daba-galka iimaylka – Looma baahna barnaamijka iimaylka, Phonesite-yada ku dhex dhisan nidaamka emaylka ayaa kuu ogolaanaya inaad si toos ah u dirto dabagal.
Caawimo hel - Taabo koox khubaro ah si aad uga caawiso 1-on-1 istaraatijiyad wac, wada sheekeysi toos ah, bulsho gaar ah, iyo aqoon-is-weydaarsiyo toddobaadle ah.
Nidaam kasta oo maareynta nuxurkaCMS) requires integration capabilities to enhance and add-on features and functionality. Phonesites is no different, with productized integrations to Zapier, Mailchimp, Stripe, Twilio, Vimeo, YouTube, Google ReCaptcha, Facebook Ads, Google Analytics, Hotjar, Calendly, and more.
Bilow Tijaabada Goobaha Taleefanka ee Bilaashka ah
Shaacinta: Waxaan ku xirnahay Goobaha telefoonada oo waxaan u adeegsanayaa xiriirinteyda ku xiran maqaalkan.
Tags: isku dar ahtifaftiraha jiido oo hoos u dhigxayeysiiska facebookfoomamkaAnalytics googleGoogle ReCaptchahotjarbog dhisaha webkaboggaga soo degayaururinta rasaastamailchimpgoobaha telefoonadafoomka iibkawax dhisaha funnel iibkagoobaha funnel iibkakarbaashTwiliovimeoDhismaha Websitekayoutubezapier
Spocket: Bilaw oo si aan kala go 'lahayn isugu xidh meherad wax-soo-saarka ah iyo Platform-kaaga Ecommerce
Retina AI: Isticmaalka Saadaasha AI si loo wanaajiyo Ololaha Suuqgeynta oo loo dhiso Qiimaha Nolosha Macmiilka (CLV)